Business Certificates ho an'ny mpandrindra & Professional | NY
Drafitra momba ny tetikasa sy ny fitantanana
Fampandrosoana sy Fihaonana momba ny Business Business Course
Famerenana ny fandaharam-pampianarana
Fomba fifidianana ho mpandala ny ara-barotra
2. Manana mari-pahaizana momba ny fanaraha-maso momba ny varotra
Aiza no ahazoana ny Business Analyst Course
Ny mpandinika ny raharaham-barotra dia manaiky ny olana, mandany ny filàna, mifampiraharaha amin'ny vondrona tetikasa, ary mahafantatra ny fiovana amin'ny fitarihana orinasa. Manatsara sy mametra ny fomba fiasan'ny orinasa izy ireo, ohatra, ny fahazoan-dàlana, ny tombom-barotra amin'ny fihenam-bidy ary ny hafa. Ny vahaolana omen'izy ireo dia fanavaozana mifototra. Ny tombontsoa ho an'ny mpanadihady dia eo amin'ny fiakarana any amin'ny sehatra rehetra.
Ny kalitao dia mitaky fahaiza-manao azonao ianarana amin'ny fanadihadiana ara-barotra. Ny diplaoma sy ny manam-pahaizana amin'ny sehatry ny fandraharahana ara-barotra dia manome anao ampy tsara ho an'ny seho an-tserasera. Na izany aza, ny programa fanatanjahan-tena dia manolotra fanofanana izay indrindra indrindra. Ny fianarana dia manoro ireo singa miavaka amin'ny fandalinana fandalinana ary manome ny zavatra ilaina ilaina.
Ny làlan-dehibe dia manan-danja ho an'ireo manam-pahaizana sy manam-pahaizana izay mila mijanona ho manan-danja eo amin'ny dokam-barotra ankapobeny ary ankoatra ireo avy hatrany any am-pianarana
Ny fanadihadiana ara-barotra dia natao ho an'ireo izay manitikitika ny fanampiana ny mpanjifa tanjona ara-barotra. Ny sekoly sy ny oniversite dia manolotra ny fianarana any amin'ny birao, ohatra, ny fanatsarana ny fahaiza-manao sy ny fampiofanana. Ny vanim-potoana momba ny mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana dia tsy ampy herintaona izay ary mila mandinika ny 4 amin'ny 10 fianarana miaraka amin'ny electives.
Ny fianarana hevitra ao anatin'ny fandaharanasa momba ny varotra dia:
Fizarana ho an'ny mpandalina ara-barotra
Fahatakarana ny filàn'ny fikambanana iray
Hevitra fototra momba ny fanadihadiana ataon'ny orinasa
Fampitomboana ny tombantomban'ny tetikasa
Famakiana sy fikarakarana ireo olana mifandraika amin'ny orinasa
Ny fikarohana momba ny raharaham-barotra tena ilaina dia mampahafantatra anao ny ampahany amin'ny mpandalina ary ny fanoloran-tenany amin'ny fandaminana. Famerenana an-tariby mampisaraka ny asan'ny mpandalina ara-barotra. Ny sasany amin'ireo fikarakaranao dia mampiasa ireo paikady sy rafitra fototra hikarakarana olana ara-barotra, manombana ny fanatanterahana ny vahaolana, ary ny fanamarinana dia tonga.
In drafitra sy fitantanana ny tetikasa, mandray amin'ny rafitra sy ny teknikam-pahaizana momba ny fiatrehana tetikasa iray. Manaraka anao amin'ny fanadihadiana ifotony ihany koa. Ny lahateny ao amin'ny fianarana dia:
Miaraka amin'ny faniriana rehetra
Manapa-kevitra ny fandaniana, ny fananana fototra sy ny diplaoma manontolo
Mila sy manatanteraka ny tetikasa
Ny fangatahana fanangonana
Ny fandaharam-pianarana dia mampiseho ny fomba fitsaboana hevitra, fivoriana, fanangonana sy fitakiana ny fepetra, ohatra, fivorian'ny ivon-toerana, ary ny hafa. Mampitombo ny fandraisan'anjara tanana amin'ny alàlan'ny fanaovana tatitra ara-barotra momba ny raharaham-barotra.
Eo am-pivoarana, azonao atao ny mamantatra ny fomba hamotehana ny vaovao nangonina ary hitady vahaolana izay miresaka ny olan'ny namana. Ny famotsorana tsy tapaka ny vahaolana dia mamaritra sy manombana ny vokatra.
Rehefa ela ny ela, azonao atao ny mamantatra ny fandinihana natao. Ity fivoarana ity dia ahitana ny fitsapana sy ny fanekena ny vahaolana mba hanomezana valiny ny vokatra tsara sy ny vokatra. Tokony hifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny mpanjifa ny vahaolana ary hamita ny vokatra tiany. Hiasa amin'ny fanaovana fitsapana ianao amin'ny fanamafisana ny vahaolana naroso.
Maro ireo fomba ahafahanao manatona anao amin'ny fiantsenan'ny mpandraharaha ara-barotra. Mety ho tsara kokoa ny fepetra azonao raha toa ka avoaka ny fahaiza-miasa amin'ny IT sy ny orinasa. Ny fahatakarana tsy azo lavina amin'ny tsena iray dia mametraka anao avy eo. Ankoatra ny fianarana azonao atao dia afaka manampy anao ho lasa mpanadihady ara-barotra ireto:
Ny mpandrindra ny software dia manana fitrandrahana sy fanadihadiana momba ny informatika, ary ny fahaiza-mifandray. Ny fijerena ny fanadihadiana momba ny raharaham-barotra sy ny fampidirana ireo fampahalalàn'ny rindrambaiko dia manampy anao hitaky fidiram-bola ambony kokoa amin'ny asa fanadihadiana ara-barotra.
Mandray anjara amin'ny fandaharanasam-pandraharahana momba ny fanarahamaso ny orinasa momba ny vintana tsy ahafahanao manatontosa mari-pahaizana efa-taona any amin'ny faritra, ohatra, HR, sehatr'asa, fitantanana trano, ary raharaham-barotra. Horaisinao ireo fahaiza-miaina manan-danja hikarakarana asa ho toy ny mpandalina ara-barotra.
Ny fanovana ny fanatanjahantena aorian'izany fotoana izany dia ny fandraisana anjara amin'ny sehatry ny asa. Diniho ny fandaharanasa momba ny raharaham-barotra mba hahazoana fahaiza-manao ary hivoatra ny kalitao. Tsy hanentana fotsiny ny orinasa ianao, ary handresy bebe kokoa.
Ny fanadihadiana ara-barotra an-tserasera dia mampiavaka ny fitaovam-piadiana amin'ny fampahalalam-baovao fototra sy ny fahaiza-manao hanatsarana endrika ara-barotra. Ny fianarana dia manome fahafahana anao handrava sy handamina ny fampiharana ara-barotra, hahazo ny fepetra voafaritra tsara, hanatsara ny safidy hafa, handefa antontan-taratasy marina, ary hanara-maso ny fepetra eo amin'ny fiainan'ny tetikasa.
Ny ankamaroan'ny oniversite dia manolotra kilasy 4 taona ho an'ny kilalaon-tsekoly sy ny fandaharam-pampianarana momba ny varotra. Ny fikambanana sasany ao amin'ny IT dia manolotra torolàlana mitovy amin'izany. Innovative Technology Solutions dia toe-javatra manokana satria efa ela no nanananay sy nanosika ny fianarana Oracle Certification ho an'ny mpandalina vaovao sy matihanina.
Ny orinasa maromaro dia mampifandray ireo mpandalina mba hanampiana azy ireo hanitsy ny toe-draharaha. Amin'izao, fanadihadiana ataon'ny orinasa dia singa iray pianarana ao amin'ny oniversite sy toeram-pampianarana hafa manerana izao tontolo izao. Azonao atao ihany koa ny mandray ny lalana avy amin'ny ITS.